I Need For Travel Medical Insurance | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > I Need For Travel Medical Insurance
yi Jenn Hamann
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 26/09/2020)
Ingxenye ebangel ojikelezayo phesheya ke Ukungaqiniseki amava. Xa ukuya kwilizwe lasemzini, uya mabaqhelaniswe iinkcubeko ezahlukeneyo, izilungiselelo, yaye amava. Nokuba wenza amanye uphando, uqinisekile ukuba esithathwe isimanga yi ezinye okufumanayo. Ngelishwa, ayizizo zonke izimanga nazo ukuze babe emihle, ngenxa nje wena kwikhefu akuthethi akuthethi ukuba umzimba okubi.
Mhlawumbi awufuni ukuba ezi yamashwa nto yenzeke kuwe, kodwa kufuneka bazilungiselele kungenzeka ukuba, okanye umntu omthandayo, uya kufuna unyango ngexesha kude nekhaya. Nokuba nje elula NOKUCUKUCEZA izinyo lakho, spraining iqatha lakho, esihla ngumkhuhlane okanye isifo sentliziyo, ezifumana unyango kufuneka Bangabi lula njengoko uya kuba eUnited States.
Oko kungenxa yokuba uninzi izicwangciso-inshorensi yezempilo bemveli musa yandisa coverage ngaphaya kwenzeka ntoni kumhlaba American. Oku kuthetha ukuba unokuba phezu hook amawaka eerandi iindleko zonyango ngenxa yokuba wanyamekela ufumana phesheya. Le nto akukho mhambi kufuneka ngaphandle inshorensi yezonyango zokuhamba. Ezi zicwangciso ezizodwa ziya kuhamba apho coverage lwakho lwasekhaya angeke, ukuqinisekisa ukuba uya kukwazi uzakuyonwabela i uhambo lwakho ngaphandle kokukhathazeka malunga ukwenzeka engalindelekanga.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga inshorensi yezonyango zohambo yaye kutheni kufuneka ucinge ukufumana ngayo, jonga kwisikhokhelo ngezantsi.
Kutheni Travel Medical Inshorensi asiyongcamango ilungileyo?
• Ukuhamba ukuba zwe angaphandle bangangenisa ingozi zempilo ezininzi. Umzekelo, umgangatho wamanzi isenokungabi njalo, ekhokelela ekubeni nomntu. kwimozulu ezahlukeneyo ubunzima iimeko zakho pre-ezikhoyo, ezifana nesifo sentliziyo okanye uxabana, iyishiye ugule-ngokwaneleyo ukusingatha le meko.
• Nokuba ngaba sele unayo i-inshorensi yezempilo, ukuze ayiyikukuhlawula ngaphandle United States. Oku kuthetha nayiphi izigulo okanye ukwenzakala kwakho xa kusiyiwa phesheya kunokubangela iindleko zonyango phezulu kakhulu.
• Ukuba ngaba ukutyelela yinxalenye ekude yehlabathi yaye zifuna unyango ngoko nangoko, unokufuna ukuba bakhutshwe kwisibhedlele. Ngaphandle Ukuhlanganisa eyiyo inshorensi, oku zinokubiza amashumi amawaka eerandi ngaphezulu naziphi ezinye iindleko ezinxulumene.
• Kwezinye iimeko, uyakulindeleka ukuba i-inshorensi yezempilo naweehambo ngethuba uhambo lwakho. Umzekelo, iindwendwe Russia, Tyhubha, kunye nezizwe kwi Schengen Area of ​​EU umele ukuba sibe sifike.
• Nangona kwezempilo umdla kunokuba lixabiseke kakhulu, kuyo uqobo akhawunti ngaphantsi kwe 10 ekhulwini zonke iimveliso-inshorensi yokuhamba ethengwe abahambi, bebe ayibizi.
Indlela Travel Medical Insurance Kukukhusela
• Iindawo ezinika umdla inshorensi yonyango kwahlukile nkqubo zesezantsi i-inshorensi umdla kakhulu ukuba ayenzi azibandakanyi ukuba iindleko ezinxulumene barhoxa, ukubambezeleka okanye iziphazamiso.
• Nge-inshorensi yezonyango zokuhamba, unokuba coverage xa ​​kuthe kwakho imeko kaxakeka yempilo engalindelekanga. Ezi lisukela izinyo eyaphukileyo okanye isifo ityhefu ukutya nomonzakalo ezisongela ubomi kunye senhliziyo.
• Enye inzuzo ephambili yale nkqubo kukuba zikunika 24/7 inkxaso iilwimi ukukunceda kulungelelaniselwane nabasebenzi kwezempilo kwilizwe langaphandle.
• Le nkqubo ngokuqhelekileyo ukunika ingxelo ngenxa yesenzo eso abajongwa iqhosha zonyango iindleko. Ezi ziquka Utyelelo kwigumbi labagula, Iinkonzo ngobungxamo zokuhamba iindleko ezenziweyo ukufikelela kumaziko onyango afanelekileyo.
• Izicwangciso ziqhelekileyo zifikelela uhambo eyodwa, kodwa nabo zingathengwa ukukhusela ixesha elide kangangoko 12 iinyanga. Ukuhlanganisa Long-term lonyango abo abahamba rhoqo okanye ixesha elongeziweyo kwakhona zingathengwa ngokwemizuzu ngenyanga.
Ukulungele ukuba uqale uhlole iindlela zakho? Incwadi itikiti kuloliwe ngoku ngeli imozulu efudumeleyo sihlala, ngokuncedwa Gcina A Isitimela!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Elona Okuchukumisayo Universities EYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Umxokozelo apha PDF ngokuba eli nqaku olwanikwa Gcina Uloliwe ngu Iinkonzo lweMatriki Illinois
Jenn started in the Insurance industry in 2007. Within her first year, she was one of the top 10 producers in the country with one of the largest and most widely known insurance agencies. Lives in Illinois and continues her focus on her job, usapho, and travels. - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam
Angamanani zokufikela yaseYurophu nendlela yokuzifumana Kukhona
Uhambo loLoliwe, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe eSpain, Uloliwe iTurkey
10 Days Switzerland Travel yohambo
Uhambo loLoliwe, Uloliwe eSwitzerland, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe